श्रीमान बाहिर,नेपालमा श्रीमती गर्भवती।कसको बच्चा भनेर सोध्दा नसोचेको जवाफले सबै चकित,पुरा हेर्नुहोस – Khabar PatrikaNp
October 26, 2020 7515
काठमाडौं । विश्वमा हरेक दिन नयाँ र अनौठा घटनाहरु भइरहेका हुन्छन् । अहिले बाहिर आएको समाचार भारत बिहार राज्यको हो । जगदीशपुर पुलिस क्षेत्र यहाँ छ । यहाँ एक महिला गर्भवती हुने बित्तिकै बबाल भएको छ । महिलाको नन्द यस सम्बन्धमा डीआईजी पुगेकी थिईन् । अब तपाई सोच्दै हुनुहुन्छ, के भयो ?वास्तवमा, गर्भवती महिलाको पाँच वर्ष पहिले विवाह भएको थियो । ऊसँग डेढ वर्षकी छोरी पनि छ । तब सम्म सबै कुरा ठीक थियो । महिलाको नन्दका अनुसार उनकी भाउजु तीन महिनादेखि गर्भवती भइन् । जबकि उनको दाई लामो समय देखि सँगै छैन । दाई सात महिना देखि कोलकातामा छन् । सात महिना देखि भेटघाट नभएपछि भाउजुको पेटमा बच्चा कसरी आयो भन्दै प्रहरीमा उनले खबर गरिन्।
Prevअक्सफोर्ड कोभिड-१९ खोप बारे आयो खुसीको खबर…!
Nextअभिनेता पल शाहले सियोनाको लागि दशै दक्षिणा स्वरुप टिकाकै दिन १ लाख प्रदान
बाध्यताले खाँडी देशमा पुगेकी नेपाली चेलीको दर्दनाक (भिडियो) मन सम्हालेर हेर्नुहोस
ट्रकभित्रै खाना बनाउँदा २ वटा ट्रकमा आगला’गी भएको छ
श्रीमती सधैं श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन….? जानी राखौ (30425)